Daawo Sawirro: Cabdullaahi Ciilmooge Xirse oo Maanta ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u Taagan Xilka Madaxtinimada Dalka | Kismaayo24 News Agency
Daawo Sawirro: Cabdullaahi Ciilmooge Xirse oo Maanta ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u Taagan Xilka Madaxtinimada Dalka
Sunday October 30, 2016 - 4:12 under Somali News by Tifaftiraha K24
Xisbiga Jacel hormarka iyo Nabada ayaa ee marka magaciisa la soo gaabiyo la yiraahdo XIIS ayaa maanta Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ku qabtay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay, Xafladaasi oo lagu soo bandhigayay Musharaxa Xisbiga U matalaya Xilka Madaxtino ee dalka, mudane C/llaahi Ciilmooge Xirsi ee sanadkan 2016-2020.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeyb galay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka, siyaasiyiin,, odey dhaqameedyo, ganacsato, aqoonyahanno, waxgarad, culamaa’udiin, haween, iyo dhalinyaro ka kala socota 17-ka degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Banaadir.
Inta ay socotay munaasabada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qeyb galay xafladda waxa ayna dhamaantood si weyn u soo dhaweeyeen musharaxa xilka madaxtinimo ee dalka, C/llaahi Ciilmooge Xirsi.
Sidoo kale xubnihii ka hadlay Munaasabada ayaa ku tilmaamay C/llaahi Ciilmooge Xirsi inuu waxqabad wanaagsan muujiyay mudadii uu hayay xilka Wasiirka Warfaafinta intii u dhaxeysy 2012-2014, waxaana lagu xusuustii soo bandhigistii shaxda Terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo gacan ka geysashadii xil wareejintii Shirkadda Favori ee lagu wareejiyay maamulka Garoonka diyaaradaha.
Intii ay munaasabadda socotay waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka musharaxa mudadii uu ka soo shaqeeyay dalka iyo waxyaabaha u qorsheysan in uu wax ka qabto marka uu ku guuleysto talada dalka, si shacabka looga samata bixiyo dhibaatada xooggan ee ku habsatay dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Musharax C/llaahi Ciilmooge Xirsi oo khudbad ka jeediyay Munaasabada ayaa ka hadlay waayo aragnimadiisa, aqoontiisa iyo howshii uu soo qabtay, intii uu ahaa Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ee Xukuumaddii Saacid.
Balse Waxaa uu sheegay in dalka u baahan yahay is bedel weyn, isagoo xusay in afar sano ka hor halka la joogay maanta la joogin, waxaana uu soo qaatay sida loogu tuntay sharciga iyo in laga wareegay hey’addii sharci dejinta aheyd.
Musharax C/llaahi Ciilmooge ayaa ugu baaqay Xildhibaanad labada aqal inay qofka ay dooranayaan ku eegaan Soomaalinimo iyo Wadaninimo, qalbigiisana eegaan waxa ku jira, iyadoo aan loogu eegin hadba dowladda uu saaxibka la yahay.
Isku soo wada duub musharax C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa balan qaaday in hadii uu ku guuleysto talada dalka uu wax badan ka qaban doono amniga, garsoorka iyo cadaaladda, wabarashada, caafimaadka, wax-soo-saarka dalka, dowlad wanaaga iyo waxyaabo kale oo aad u farabadan, waxa uuna xusay in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka soo dhalaali karta waxyaabaha kor ku xusan ee gundhigga u ah dowlad wanaaga iyo horumarka dalka.
Xisbiga Xiis ayaa Sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan ololaha loo sameynayo mudane Cabdullahi Ciilmooge Xirse.